बजार नपाएपछि किसानहरुले नगरपालिका परिसरमै फालिदिए टमाटर - Kohalpur Trends
बजार नपाएपछि किसानहरुले नगरपालिका परिसरमै फालिदिए टमाटर
५ फागुन, नवलपरासी । दुःख गरेर फलाएको टमाटरले बजार नपाएको भन्दै पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटका किसानहरुले बर्दघाट नगरपालिका परिसरभित्रै टमाटर फालिदिएर विरोध जनाएका छन् ।
स्थानीय किसानहरुको उत्पादनले बजार नपाउने र भारतीय आयातित टमाटर खुल्लेआम बिक्री हुने गरेको भन्दै उनीहरुले नगरपालिकाको गेटदेखि प्रत्येक कोठा र गल्लीमा टमाटर फालेर बिरोध जनाएको स्थानीय किसान निलकण्ठ नेपालले बताए ।
किसानहरुले नगर प्रमुख बस्यालको कार्यकक्षमा पनि टमाटर फाल्न खोज्दा नगर प्रहरीले रोक्ने प्रयत्न गरेको थियो । त्यसपछि वडा नं. १४ र ७ का किसानहरुले बिरोधका क्रममा दुईवटा गाडीमा ३० क्विण्टल टमाटर ल्याएर नगरपालिकाको गेटदेखि प्रत्येक कोठा र गल्लीमा फालेका हुन् ।
Previous Previous post: प्रदेश सरकारले किन काम गर्न सकेन ? संघसँग स्पीड मिलेन !
Next Next post: सावित्राको उपचारमा एन्फाले सहयोग गर्ने
सांसदहरुलाई खबरदारी गर्दै नागरिक अगुवाको लोकतन्त्र मार्च
२३ फागुन, काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरुले सांसदहरुलाई खबरदारी गरेका छन् । सांसदहरुलाई खबरदारी गर्दै प्रतिगमनविरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नागरिक…